सुत्ने बेला भोलिको राशिफल हेर्नुहोस ! - MazzakoNews
‘दुलही लिन गएको छोरा लाश बनेर आयो’आमा बेहोस् , द’लित भन्दै गाउँलेले यसरी गरे ह’त्या
छोरीद्वारा आफ्नै बुबाको टाउकोमा चि’र्पट प्रहार गरेर ह’त्या
Home / धर्म संस्कार / सुत्ने बेला भोलिको राशिफल हेर्नुहोस !
सुत्ने बेला भोलिको राशिफल हेर्नुहोस !
Mazzako News 16th May 2020	धर्म संस्कार, राशीफल Leaveacomment
साथिभाई तथा आफ्नो बिषेश मान्छेसँग दिनभर मिठा मिठा कुरा गरेर समय ब्यातित हुँने हुँदा मन खुसि रहनेछ । सवारि साधन,भौतिक सम्पति तथा आकस्मिक धनसम्पति लाभ हुनेछ । चिठ्ठा पर्ने तथा बिषेश मानिसबाट उपाहार पाईने अधिक सम्भावना रहेकोछ । पढाई लेखाईमा मन जाने हुनाले भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो हुनेछ भने बौद्धिकताको प्रयोग मार्फन आम्दानि बढाउँन सकिन्छ।
Previous बालिकालाई बला*त्कार गर्दागर्दै पत्‍नीले बाहिरबाट चुक्कुल लगाइदिएपछि !
Next मास्क नलगाउनेलाई तीन वर्ष जेल
भोली शनिबार,सच्चा मनले भगवानको दर्शन गर्दै राशिफल पढ्नुहोस।
सुत्ने बेला मनकामना मन्दिरको दर्शन गरि भोलिको राशिफल पढ्नुहोस
सुत्ने बेला पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरि भोलिको राशिफल पढ्नुहोस